d 5.2 Naghachi ehichapụ Pictures Site SD Kaadị
Ihe nwere ike ime ka data ọnwụ na kaadị ebe nchekwa
Mgbe ọ na-abịa na-edepụta ihe iseokwu ruru ka nke data ọnwụ etịbe mgbe ahụ, ọ bụ nnọọ ike iji jide n'aka na ha niile na-depụtara na ọ bụ ihe niile ruru ha ọtụtụ nọmba. Ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-akpata nke data ọnwụ na-akpa nyochaa tupu ọ bụla nzọụkwụ bụ iwere na nke a dị ka ọ ga-eme obibia directional. Iji mee ka n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri n'ihi na onye ọrụ ọ na-gwara iji jide n'aka na ihe kasị mma nhọrọ a họọrọ mere na mgbake bụ mgbe a egwuregwu mgbe niile. Ọ na-na--ahụ kwuru na software mmemme na-dị na ahịa ga-enyocha dabeere na onye ọrụ Nyocha iji jide n'aka na needful na-eme. -Esonụ na-Otú ọ dị ụfọdụ n'ime ihe na-eme ka data ọnwụ:
1. Kaadi ebe nchekwa mbipụta
Kaadị ebe nchekwa ma ọ bụ ihe ọ bụla metụtara nchekwa na ngwaọrụ na-adịkarịghị nwalere site Obodo emepụta na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị Ugboro ihe mere data ọnwụ. Kaadị ọkọkpọhi rụrụ arụ na data bụ mgbe ahụ bụghị inweta. The ọrụ na-atụ aro iji nweta elu ọgwụgwụ na ezi àgwà ebe nchekwa kaadị na nke a ka e dozie nsogbu. Ndị a kaadị bụ ndị na-juputara nwalere na nke kacha mma nkwanye na nke a bụ SanDisk na a maara na-eme ka egwu na ebe nchekwa kaadị.
2. Mgbe Ebighị Ebi ojiji
Ndụ nke ebe nchekwa kaadị bụ nnọọ ụkọ na oke ọ na-e kwuru na ọtụtụ ndị n'aka-anọgide na-eji kaadị ọbụna mgbe n'ịgbatịkwu afọ ndụ e dechara. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na na kaadị kpamkpam discarded mgbe ọtụtụ afọ nke ojiji. Ọ ga-bụghị naanị na-data mma ma ga-hụ na kaadị na-gbanwere na mgbe etiti oge izere nke kpamkpam.
3. akpachapụghị anya
Ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị njọ mere na-eduga a nke. Onye ọrụ bụ nanị maka nke na nke pụrụ ịkpata data ọnwụ. Na usoro a na kaadị wepụrụ si agụ mgbe ọdịnaya na-emeghe na kọmputa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngwaọrụ. Otu na-eme mgbe a na kaadị si data a na-agafere. Ọ bụ ya mere otu ihe iseokwu na e mere ruru ka mmadụ njehie na maka otu ihe ahụ ọ na-gwara iji jide n'aka na-eji kaadị na-elekọta na ịdị uchu izere ndị a okwu na zuru.
4. Ndakọrịta mbipụta
Ọ na-gwara Ọkpụkpọ na kaadị ebe nchekwa n'ime ngwaọrụ nke na ọ e zụrụ na-eji. Ọ bụrụ na kaadị formatted na iji kọmputa mgbe ahụ ụdi data transfer ma si na kaadị ga-aghọ onye na-adịghị na ụfọdụ na kaadị na-aghọ chere. Onye ọrụ kwesịrị mere jide n'aka na ihe kasị mma usoro na-etinyere na nke a iji jide n'aka na nke nke ndakọrịta mgbe etịbe.
Mmadụ na mberede ehichapụ data
Mgbe ụfọdụ data na-ehichapụ accidently na onye ọrụ odụk nsogbu. Ya mere, ọ na-gwara na nke kacha mma na ọkaibe na kaadị ebe nchekwa mgbake software omume na ọ bụghị naanị osobo mkpa nke onye ọrụ kamakwa ana achi achi na nsonaazụ kacha mma na-nyere mgbe ọ na-abịa mgbake. Na akụkụ ikpeazụ nke a nkuzi ga-ahụ na ọ bụghị nanị na onye dị otú ahụ software omume na ẹkenam ma yiri usoro a kọwakwara na zuru mere na onye ọrụ mgbe odụk mbipụta. The Filiks na a ga-kwuru ga-esonyere mkpa screenshots na ya mere usoro ga-eme ka ọbụna mfe n'ihi na onye ọrụ.
Ka e kwuru tupu nakwa na e nwere ọtụtụ iri puku software omume na dị online iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a. Otú ọ dị ndị kasị mma ka nwetara mma dị ka Wondershare ka ulo oru ọzọ na-akpali akpali ngwaahịa aha dị ka Wondershare Data Recovery. Nke a na usoro e nanị mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma n'ime oge ọ bụla na niile na-emekwa ka o kwe omume maka novice ọrụ iji na-enweta faịlụ gbakee. E nwere ihe abụọ ụdịdị nke usoro ihe omume ie Ọkachamara mode na Standard mode nke na-eme ihe omume dokwara usable ihe niile na-ọrụ na ya mere ọ na-ukwuu tụrụ aro. Site na kọmputa okuku ka data ọnwụ ruru ngwaike odida na Wondershare Data Recovery ka nwetara ya niile kpuchie na natara na ihe omume e weere dị ka otu nke kasị mma na-ọrụ ahụ.
Olee otú naghachi data si kaadị nchekwa na Wondershare Data Recovery
Nkọwa nke usoro e kwuru n'okpuru ebe a na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma ẹka site na isoro kpọmkwem nzọụkwụ kwuru:
1. Site http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume ebudatara, arụnyere na ulo oru nke mere na ndị na-esonụ interface egosi:
2. Ozugbo ọzọ button na-enwe onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ụdị nke faịlụ na-ahọrọ ka n'ihu n'ihu:
3. The ọnọdụ nke faịlụ ọnwụ bụkwa na-kpọmkwem na-software na-arụ ọrụ kasị mma n'ụzọ:
4. The natara faịlụ ndị mgbe ahụ ka a ga-elele iji jide n'aka na onye ọrụ naanị clicks ma ọ bụ na-achọpụtazi ndị nke a ga-natara na mgbe ahụ see naghachi button:
Akwado data ụdị nke usoro ihe omume
Esonụ bụ data ma ọ bụ ụdị faịlụ na-akwado site na Wondershare Data Recovery software omume:
Akpata software bụghị ewepụta data si na kaadị ebe nchekwa
Mgbe ọ na-abịa data mgbake software omume mgbe ahụ e nwere ndị ụfọdụ ize ndụ na-metụtara ha na ha na ruru ka nke ha mgbe ụfọdụ agaghị enwe ike iji weghachite data. The nkịtị na-akpata ndị dị ka ndị:
1. Oke anụ ahụ mmebi nke nchekwa na ngwaọrụ
2. Virus ma ọ bụ malware n'igbochi arụmọrụ nke usoro ihe omume
3. The ngwá ọrụ na-adịghị na-eji dị ka eduzi
4. The metụtara data adịghị adị na ngwaọrụ ma ọ bụ nchekwa a na-achọgharị.
5. The data mgbake omume e arụnyere na mebiri emebi ma ọ bụ iche na ngwaọrụ nke overwritten chọrọ data kpamkpam.
Olee ụdị data ka ị chọrọ iji weghachite?
Ukwuu n'ime ndị ọrụ kwesịrị iji weghachite data metụtara onwe ha, ha were na ọ na-agụnye vidio, foto na ọdịyo E na ya mere onye data n'elu ndepụta na nghoputa.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Best ngwọta naghachi data site na kaadị ebe nchekwa